Is Bar Bar Dhiga Sidii Loo Aasay Fagadhe iyo Gabadhii Caruurta Madaxweynaha Somaliland Ku Haystay Shaariqa Oo Lagu Aasay Hargeysa | Saraarnews
Is Bar Bar Dhiga Sidii Loo Aasay Fagadhe iyo Gabadhii Caruurta Madaxweynaha Somaliland Ku Haystay Shaariqa Oo Lagu Aasay Hargeysa
Hargeysa (Saraarnews.com ), Akhristayaal waxaynu maanta oo jimce ah halkan ku lafa guri doonaa laba qodob oo u dhexeeya masuul sare oo ka baxay xukumada madaxweyne Riyaale iyo Shaqsi ka mid ahaa shaqaalaha madaxweynha oo ku geeriyootay dalka India.
Sida aad ka wada warqabtaan marxuum fagadhe ayaa mudo todobaada meykiisu yaalay dalka Paris ee xarunta wadanka faransiiska.
Waxaana ka dhashay muro badan oo salka ku haya dhaqaalihii lagu soo qaadi lahaa, iyada oo ay xukumadu laba qodob kala dooradsiiyey ehelada Marxuumla Rabi ha u naxariistee.
Laakinse aakhirkii waxaa la keenay marxuumka meykiisa magaalada Hargeysa oo si heer qarana loogu aasay.
Qiimaha uu dalka uu leeyahay Fagadhe cidna loogama sheekayn karo heerkiisuna wuxu ahaa masuul qaran
Geesta kale waxaynu is berber dhigii doonaa sidii iyana loo aasay maanta mid ka mida shaqaalaha guriga madaxweyneha Somaliland ee shaariqa oo ku geeriyootay dalka India oo markiiba hargeysa la keenay.
Sida loo soo agaasiimay aaska marxuumada ayaa ahaa mid deg deg, waxaana aaskeeda ka soo qayb galay xubno badan oo ka tirsan xukmada madaxweyne Riyaale Kaahin.
Masuuliyiintaas waxaa hormuud ka ahaa hogaanka dalka madaxweyne Riyaale Kaahin iyo ilaaladiisa oo ku habusayn baabuurta tiknikada ah noocyadooda kala duwan.
Si kastaba ha ahaatee waxaynu ilaahay uga baryeynaa labada marxuum dhamaanteen in uu ilaahay Janno Farduusa ka waraabiyo.
Hadaba madaxweynaha Somaliland ayaa si weyn u kala jeclaystay aaska labada marxuum, waxaana si weyn looga dareemay maanta goobaha siyaada Somaliland lagu gorfeeyo ayaa si weyn looga hadal hayey sida uu madaxweyne Riyaale u kala door biday masuulka Qaran iyo marxuumada haysay caruurta madaxweynaha ee ku sugan Shaariqa.
Waxaanay siyaasiyiinta qaar ku macneeyeen arrintaas mid ka dhana ku tumashada sida ay sheegeen xeerarka qaranka Somaliland u yaala.
Kharashka Madaxtooyada Ku Baxa Bishii
Sida lagu sheegay daraasooyin kala duwan oo soo baxa sanadkiiba mar ayaa daaha ka rogay in dhaqaalaha bishii ku baxay qasriga madaxtooyada uu dhan yahay 62,000 (Laba iyo Lixdan Kun Oo Doolar).
Kharashkaas ayaa lagu sifeeyey in uu yahay mushaharka madaxweynaha Somaliland Riyaale Kaahin.
Kharashka sanadkiiba ku baxay madaxtooyada ayaa dhan 7,44000 (Todoba Milayn afar iyo afartan kun oo doolar).
Kharashkaas ayaa hadan waxaa laga aasay kari waayey in badan sidii aad soo arageen ama maqasheen madax ka baxday qaranka Somaliland.
Labadii Eedeysane Ee Loo Haystay Dilkii Saddexdi Nin Ee Minneapolis Lagu Dilay Oo Lagu Helay Danbigii Lagu Soo Oogay.
Axmed Silaanyo oo maanta dawladda Maraykanka u soo bandhigay siyaasadda uu xisbigiisa ku hogaamin doono Somaliland